NS Malagasy Archive | NewsMada | Page 846
Ankorondrano : ankizy 2 000 nizarana sakafo sy goûter
Par Taratra sur 13/08/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Nizara sakafo masaka sy goûter (voankazo, yaourt, biskoy…) ho an’ny ankizy mpatory an-dalana sy sahirana ny collectif Zaza faly sy ny fikambanana Rotary Ivandry, omaly teny Ivandry. Hetsika efa fanaon’ny collectif izay natsangan’i Lanika Jamal Kadaya ny fanomezana sakafo ny zaza sahirana isaky ny zoma eny Ankorondrano ka nanampy azy ny filohan’ny Rotary Ivandry, Skourtelis […]
Hiady amin’ny kolikoly ny mpiasan’ny fanabeazana
Par Taratra sur 13/08/2016 Divers, NS Malagasy
Anisan’ny laharampahamehana ho an’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena ny fampidirana ny ady amin’ny kolikoly ho taranja iray hampianarina any an-dakilasy mihitsy. Tsy ho tratra amin’ny taom-pianarana vaovao 2016-2017 nefa izany, fa tsy maintsy dinihina tsara ny lafiny teknika ahafahana manatanteraka ny asa ho matotra tsara, hoy ny fanazavana azo. Hetsika lehibe koa ny fanentanana ny mpiasan’ny fanabeazam-pirenena […]
Hiverina ny vaomiera mpanara-maso ny fitaterana (Cmc)
Niverina nanomboka niasa omaly, ny commission mixte de contrôle na (Cmc) rehefa niato nandritra ny volana maromaro noho ny fitokonana nataon’ny mpamily taxibe sy ny mpanampy azy ireo teny amin’ny zotra maromaro (137, zotra F, 133…). Hanara-maso ny firindran’ny fitateram-bahoaka ato anatin’ny kaominina ambanivohitra Ambavahaditokana izy ireo, araka ny vaovao azo, omaly. Mandrafitra ny vaomiera […]
Nifandona ny mpivarotra amoron-dalana sy ny mpiasan’ny kaominina
Taorian’ny hetsika nataon’ireo mpivarotra amoron-dalana teo anoloan’ny lapan’ny Tanàna, niverina nivarotra ihany izy ireo na teo aza ny fandrarana sy ny lalàna efa navoakan’ny kaominina. Araka izany, nidina an-tsehatra tamin’ny fanalana azy ireo ny polisy kaominaly sy ny ireo mpiasan’ny tsena ary ny polisy nasionaly, omaly. Nisy ny fifandonana teo anoloan’ny pavillon omaly atoandro, tokony […]
FMTS : voafidy ho filoha Rabenandrasana Lalao
Par Taratra sur 13/08/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Tontosa omaly, tao amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy, ny fifidianana ireo mpikambana handrafitra ny birao hitantana ny Federasion’ny mpikanto teny sy soratra (FMTS). Voafidy ho filoha tamin’izany Rabenandrasana Lalao François. Izy sy ireo birao voafidy niaraka taminy no hitantana ny FMTS ao anatin’ny telo taona manaraka indray. Nambaran’ity filoha voafidy hitondra ny FMTS ity fa ho laharampahamehana […]
Tsy tanteraka ny fampanantenana : mandrangaranga fitokonana indray ny mpirakidraharaha fitsarana
Miala any indray ! « Nampiato ny fitokonana izahay ary nanome roa volana hatramin’ny 6 aogositra teo, mba niandry fa hotanterahin’ny minisitry ny Fitsarana ny fampanantenany hamahana ny olanay. Tapitra ny fe-potoana, saingy tsy tanteraka izany ka hivory izahay handray fanapahan-kevitra », hoy ny filohan’ny sendikàn’ny mpirakidrahara, Andriambololona Haja, afakomaly tetsy Antaninarenina. Nohitsin’izy ireo ny tsy fahamarinan’ny nambaran’ny […]
KMF/Cnoe : tsy fanonganam-panjakana ny fiaraha-midinika
Hanao ahoana ihany ny hoe fikaonandoham-pirenena? Matahotra fanonganam-panjakana ny mpitondra. Tsy izany io, raha ny hevitry ny KMF/Cnoe. “Ny zava-misy aloha amin’izao fotoana izao, mikaikaika avokoa ny olona rehetra amin’ny ankapobeny. Mikaikaika amin’ny vidim-piainana, ny tsy fandriampahalemana, ny antsojay samihafa… ” Io ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionaly vonjimaika eo anivon’ny KMF/Cnoe, Rabekijana Félix, teny amin’ny […]
Hijery ny fizotry ny asa fanarenana ny eny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ny filoha Rajaonarimampianina anio. Tsiahivina fa anisan’ny antony fanatsarana sy fanavaozana ny eny an-toerana ny handraisantsika ireo fihaonana an-tampony hatao eto amintsika ny volana oktobra sy novambra izao. Hivoaka anio ny fehinkevitry ny fivoriambe tsy ara-potoana eo anivon’ny evekan’i Madagasikara, tanterahina etsy Antanimena. Tombanana […]
Neken’ny HCCny lalàn’ny fifandraisana…
Efa nampoizina… Hiroso any amin’ny jadona sy ny fanampenam-bava isika, manomboka izao taorian’ny naneken’ny HCC etsy Ambohidahy, araka ny fanapahana noraisin’izy ireo, omaly fa mifanaraka amin’ny lalàmpanorenana ilay lalàna mifehy ny fifandraisana sy ny serasera. Mifanaraka amin’ny lalàna avokoa ary azon’ny filoham-pirenena hampiharina avy hatrany, ankoatra ny andininy sasany ilana fandikana manokana ny fomba famakiana […]
55 taona ny polisim-pirenena : mitohy ny lalao ara-panatanjahantena
Par Taratra sur 13/08/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Tontosa teny amin’ny Kianjaben’i Mahamasina, ny talata teo ny lalao famaranana eo amin’ny taranja baolina kitra izay tafiditra ao anatin’ny fanamarihana ny fankalazana ny faha-55 taon’ny polisim-pirenena. Fihaonana efatra no notontasaina tamin’izany. Teo ny sokajy Veteran izay nihaonan’ireo polisy miasa ao amin’ny foibem-pitantanan’ny polisim-pirenena Anosy sy ireo polisy miasa any amin’ny kaomisaria sy ireo avy […]
Mirongatra indray tato ho ato ny fisolokiana avolenta ataon’ny mpisoloky amin’ny finday izay milaza fa nahazo fiara lehibe iray aorian’ny fisarihana. Mandefa hafatra amin’ny finday ireo mpisoloky izay milazalaza ny adiny rehetra momba ny loka lazainy fa azon’ilay olona. Tsy misy akory anefa ary milaza izy ireo fa nikarakara fisarihana tamin’ny alalan’ny orinasa goavana iray […]
Ambohidratrimo : jiolahy telo lahy nandroba mpianaka kely
Mody mandondona, misandoka, kanjo olon-dratsy ary mandrahona sy mandroba avy hatrany. Mpianaka kely tratran’izany teny Ambohidratrimo… Jiolahy telo nandondona tao amin’ny tranon’olona iray teny Ambohidratrimo, omaly vao maraim-be, tokony ho tamin’ny 3 ora sy sasany maraina. Noheverin’ity farany fa ny vadiny ka novahany ny varavarana. Niditra avy hatrany ireto jiolahy ka nanambana antsy azy mba […]
Andranofeno – Fenoarivo Atsinanana : mpitandrina nanao hosoka tany mandrahona fokonolona
Ahina hitarika savorovorom-piaraha-monina ao Fenoarivo Atsinanana indray ity olana ifandroritan’ny Mpitandrina roa, talen’ny sekoly Fjkm teo aloha andaniny ary etsy akilany kosa ny fokonolona ao amin’ny fokontany Andranofeno parisela faha 3. Trano miisa 50 tafo izay ahitana fokonolona manodidina eo amin’ny 300 isa. Nanambara aloha ireo solontenam-pokonolona fa tsy misy idiran’ny fiangonana ny raharaha fa […]
Mangingina ratsy… mamitaka
Par Taratra sur 13/08/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Tsy mahamanina intsony ny “Raharaha Soamahamanina”? Tsy hita izay iafarany. Mangingina ho azy. Toy ny hafa rehetra ihany: ny fakana an-keriny tany Toamasina, ny “Raharaha Anjozorobe”, ny momba ny fiaramanidin’ny filoha, ny “Raharaha rongony” tany Toliara, ny andramena any Singapour… Manginy fotsiny ny hoe kolikoly, ny kiantranoantrano amin’ny tolotrasam-panjakana, ny tsy fisian’ny fangaraharana amin’izay atao […]
Henjana ny fanambaran’ny Fivondronamben’ny eveka : fitondrana tsy mahomby, mpanao fampanantenana poakaty…
Par Taratra sur 13/08/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Nivory maika, tsy ara-potoana ny eo anivon’ny fivondronamben’ny eveka tamin’ity herinandro ity. Anisan’ny nivoitra tamin’ny fehinkevitra ny raharaham-pirenena. Mazava ny hafatra. « Fitondrana tsy mahomby… mpanao fampanantanana poakaty… », hoy ny mpitondra teny, Mgr Rabemahafaly Fulgence Nanombohan’ny eveka ny hafatra ny filazana ny andininy ao amin’ny Soratra Masina fa toy ny ondry tsy misy mpiandry ny vahoaka […]
Balita Marvin : un retour plus « agressif »
Par Les Nouvelles sur 12/08/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Une des voix d’or de la musique de la Grande île, un des pionniers du R’n’B du pays, idole des mélomanes de sa génération, Balita Marvin est l’un de ces artistes talentueux les plus appréciés des années 90. Mais malgré l’envol de sa carrière musicale, il a choisi de prendre du recul, en 2009. Depuis […]
Festival Kanetibe 2016 : hisokatra, anio, ny fisoratana anarana
Par Taratra sur 12/08/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Manomboka, anio zoma, ny fisoratana anarana amin’ny “Festival kanetibe”, andiany faharoa. Fihaonana hatao etsy amin’ny kianja CBT Mahamasina, ny asabotsy 13 sy alahady 14 aogositra ho avy izao. Fetin’ny kanetibe tokoa izy ity satria nomena sehatra hifaninana ny olon-drehetra na kely na lehibe na antitra na tanora na vavy na lahy, na manana kara-pilalaovana na […]
Efa nampoizina. Tsy tafakatra niatrika ny manasa-dalana amin’ny Lalao Olympika 2016, eo amin’ny taranja lomano, i Estellah, solontenantsika tokana teo amin’ny sokajy vehivavy. Tany amin’ny laharana fahenina no nisy azy teo amin’ny fifanintsanana. Izay no vita. Taorian-dRatiarson Asaramanitra (judo) sy Ravololoniaina Elisa Vania (fibatana fonjamby), vita hatreo koa ny momba an-dRabetsara Fils Estellah, teo amin’ny […]
Andriamifehy Mireille Ifaliana. Mpikatroka judo eo amin’ny sokajy “cadette” -52 kg ao amin’ny klioba Esca. Teraka ny 15 febroary 2001 ary 15 taona izy ankehitriny. Kilasy 1ère C ao amin’ny sekoly Esca Antanimena. Namirampiratra ary nisongandina nandritra iny “Jeux de la CJSOI” andiany faha-10 teto amintsika farany teo iny. Nandrombaka medaly volamena roa ny tenany […]
Kitra – «Ligue des champions» : tafaraka ny Cnaps sy ny Tana Formation
Par Taratra sur 12/08/2016 Divers, NS Malagasy
Hanomboka, amin’ity andro zoma ity, ny fifanintsanana hiadiana izay ho tompondakan’i Madagasikara «Ligue des champions», taranja baolina kitra. Ekipa 24 no hiady ny lohany amin’ity. Hiaro ny anaram-boninahitra azony, tamin’ny taona 2015, ny Cnaps Sport, izay hilalao eto Antananarivo, ary hiaraka amin’ny Tana Formation sy ny FC Vakinankaratra, ao anatin’ny sokajy “C”. Ankoatra izay, hangotraka […]
Tanora malagasy YALI : hanangana tetikasa ho an’ny sahirana
Par Taratra sur 12/08/2016 Economie, NS Malagasy
Tanora malagasy manampahaizana 15 mianadahy voafidin’ny masoivohon’i Etazonia ao amin’ny Young African Leaders Initiative (YALI) nanaraka fiofanana tany Etazonia tamin’ity taona ity. Nanome lanja ny toeran’ny tanora ny tompon’andraikitra iray vaovao ao amin’ny masoivoho amerikanina, Rtoa Amy Kornbluth. Anisan’ny nanaraka fiofanana, Razafindrabesa Narioela Tsiferana, manampahazaina momba ny fitantanana sy ny fandraharahana. Izy no nanorina sekoly […]
Fiarovana ny ranomasina : izay mandoto manefa, hoy ny OMI
Roa andro, nanomboka omaly sy anio atrikasa momba ny fiarovana ny ranomasina, tokony hifanaraka amin’ny « Convention de Londres », karakarain’ny APMF. Nanokatra izany eto Antananarivo i Edward Kleverlaan, avy amin’ny Organisation maritime internationale (OMI). « Noho ny fiovana betsaka hita eo amin’ny lafiny toekarena, atahorana hatrany ny loza mety haterak’izany eny an-dranomasina, na eo amin’ny fitaterana an-dranomasina […]
Nanavao ny fiaraha-miasany ny Orange solidarité
Par Taratra sur 12/08/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Natolotra teny amin’ny Tour Orange eny Ankorondrano, ireo tetikasa hotohanan’ny Orange solidarité Madagascar amin’ity taona ity. Anisan’ny voakasiky ny tetikasa fiaraha-miasa ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena amin’ny fanabeazana nomerika. Tafiditra ao koa ny minisiteran’ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny teknolojia vaovao. Sehatra iray mahazo ny tohan’ny Orange solidarité koa ny minisiteran’ny Mponina sy ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka. […]
Barikadimy : nanome boky ny mpianatra atsy La Réunion
Na eo aza ny firoboroboan’ny teknolojia sy internet eto amintika, mbola azo lazaina ho manana ny maha izy azy sy mitazona ny maha zava-dehibe azy eo amin’ny fikarohana fanamafisam-pahalalana sy fianarana ny boky. Fantatra izany, nandritra ny fanolorana boky miisa 35.000.000 nataon’ny fikambanan’ny mpianatra malagasy mandranto fianarana atsy amin’ny Nosy La Rénion ho an’ny oniversiten’ […]
Vokatra nasionaly : niakatra ho 40,01% ny taham-pahafahana BEPC
Feno ny vokatra tamin’ny BEPC farany teo ho an’ny sehatra nasionaly. Niakatra ny taham-pahafahana ary nizotra tsara ny fanadinana amin’ny ankapobeny. 40,01% ny taham-pahafahana BEPC manerana ny Nosy, izay nahitana fiakarana satria 39% tamin’ny taon-dasa, araka ny fanambaran’ny tale jeneralin’ny fanabeazana fototra sy ny fampianarana mamaky teny, Andriamampandry Todisoa. Amin’ny ankapobeny, nizotra tsara ny fanadinana […]
« Précédent 1 … 844 845 846 847 848 … 1 040 Suivant »